Ka ị na-etokwu ndụ gị ma na-eme ya eme, ị ga-ahụkwu na ndụ ị na-eme. - Oprah Winfrey - na-ekwu okwu Pedia
Ka ị na-etokwu ndụ gị ma na-eme ya eme, ị ga-ahụkwu na ndụ ị na-eme. - Oprah Winfrey
Ndụ bụụrụ anyị niile ngọzi. Ọ bụ njem dị ịtụnanya nke nwere oke ya na elu. Onyinye nyere anyi onu nke uwa uwa na mmekorita anyi n’etolite dika anyi n’eto.
Ọ bụrụ n’ile anya, ọnụ ọgụgụ nke ihe karịrị ike karịa gị niile ga-eju gị anya. Anyị bụ nanị obo dị na mbara ụwa a, ma anyị nwere ike ịme ọtụtụ ihe. Anyị kwesịrị otua, jiri ndụ anyị niile ma bie ya n'ụzọ kachasị arụ ọrụ.
Mgbe ụfọdụ anyị na-eme ụfọdụ mmemme ụfọdụ. Mana ọ bụrụ n’ịmụta inwe afọ ojuju na ime ọtụtụ ihe na ndụ, mgbe ahụ ikekwe anyị nile ga-akawanye mma na nwekwuo obi ụtọ na ndụ. Anyị ga-amụta ịhụ ebe ndị ọzọ na-eme nke ọma na ito ya. Nke a na - akwalite ndị ọzọ ịga n’ihu ọrụ ọma ha ma were nzọụkwụ ọzọ na-aga n'ụzọ ziri ezi.
Mgbe ị toro ma tokwaa ndụ gị ọtụtụ oge, ị ga-ahụ ọtụtụ ohere ịchọrọ ịnwale. Nke a na-eduga n’inweta ahụmịhe ndị ọzọ na-akpụzi anyị ịbụ ụmụ mmadụ tozuru okè. Ya mere, anyị na-ahụ ọtụtụ ihe na oge anyị ga-eji mee ememe.
Ndụ na-atọkwu ụtọ. Mgbe ayị ji ọhụụ ma too ndụ anyị, anyị na-achọpụta oke ihe ùgwù n’ezie anyị bụ. Ọ bụ mgbe ahụ ka anyị kwesịrị inyere ndị ọzọ nọ ná mkpa aka. Nke a na - eme ka ndụ ha ka mma ma na - emekwa ka ọha mmadụ gaa n'ihu. Ọ bụrụ na anyị ga - azụlite echiche a, mgbe ahụ anyị ga - enwe ike bie ndụ obi ekele.
Na Etu Ntutu Na Ndụ
Na-a Lifeụ Quotes Life
Na-a Quụ Quotes
Nwee obi ụtọ na Quotes Life
Kwuru okwu ama ama banyere ndu
Akwa Ndụ Quotes
N'ike mmụọ nsọ Quotes Banyere Ndụ
Inspirational Quotes Na Life
Okwu ndu ibi ndu
Ndụ Ndụ Quotes
Theme ihe kachasị mma n'oge a na-etinye gị n'ọnọdụ kachasị mma maka oge ọzọ. - Oprah Winfrey
Ime ihe kacha mma n’oge a na-etinye gị n’ọnọdụ kachasị mma maka oge ọzọ. - Oprah…
Mee ihe okwesiri ime ruo mgbe ị ga - eme ihe ịchọrọ ịme. - Oprah Winfrey
Mee ihe okwesiri ime ruo mgbe ị ga - eme ihe ịchọrọ ịme. - Oprah Winfrey…
Nwee obi ekele maka ihe i nwere; ị ga-emecha nwekwuo ego. Ọ bụrụ n’ilekwasị anya n’ihe ị na-enweghị, ị gaghị enwe, afọ agaghị ezu. - Oprah Winfrey
Na ndu, odighi nkpa igbachapu ihe gi enweghi! Nke a agaghị eme ihe ọ bụla na…
Tụgharịa ọnya gị n’amamihe. - Oprah Winfrey
Ildị ọdịda na ndụ enweghị atụ. Anyị ga-enwe oke nke mgbago. Anyị kwesịrị iche…
Ọ bụ ntụkwasị obi anyị, na uche, na mmụọ anyị nke na-enye anyị ohere ịnọgide na-achọ ihe ọhụụ. - Oprah Winfrey
Ọ bụ ntụkwasị obi n'ahụ anyị, na uche anyị, na mmụọ anyị nke na-enye anyị ohere ịnọgide na-achọ ihe omume ndị ọhụrụ.…